Global Voices teny Malagasy » India: Ireo fipoahana baomba erak’i Bangalore · Global Voices teny Malagasy » Print
Nivoaka ny 26 Jolay 2008 6:00 GMT 1	 · Mpanoratra avylavitra
Sokajy: India, Ady & Fifandirana, Hafanàm-po nomerika, Vaovao Mafana
Bangalore,  renivohitry ny fanjakana ao Karnataka, dia lasibatry ny fampihorohoroana tamin’ny alàlan’ny baomba ora vitsy lasa izay. Ny vaovao ampela-tànana dia manambara fipoahana baomba fito tamin’ny faritra samihafa tao an-toerana, tanatin’ny elanelam-potoana roambinifolo minitra. Tsy dia nahery vaika loatra ireo baomba ary irony karazana zelatina (gélatine en baton) irony no nampiasaina.. Ho fisorohana ny resaka gaigy dia tapaka ny fifandraisan-davitra tao an-tanàna ary notapahana koa ny làlana. Hoy i Sachin Uppal 
Feno olona feno ahiahy sy manontany izay zava-nitranga ny toerana, izaho manokana tsy dia nahita inona loatra. Feno mpitandro ny filaminana miezaka ny mandamina ny fifamoivoizana sy ny olona teo .
Tanaàana nivoatra sy nilamina i Bangalore tato anatin’ny folo taona. Kanefa, raha jerena dia toa misy ola tsy maniry ny hisian'izany. Mety ho fanakorontanana politika izy ity na asa fampihorohoroana koa. Nefa koa, tato anatin’ny roa taona izao, dia ity no fanintelony tamin’ny fipoahana baomba goavana tamin’ny tanana toa an’i Bangalore.
Nikaro-baovao tanaty tranonkala-tseratsera i iisc life fa tsys dia nahita firy. Ny Bangalore Metblogs no misy vaovao mikasika ny toerana tena nitrangan’ny fipoahana. Keep Sakes indray dia maneho ny tsy fahatomombanan'ny fotodrafitrasa ao amin'ny tanàna .
Sahady, efa tsy manana herinaratra intsony izahay, tsy misy solika (lasantsy sy gazoala), tsy misy fotodrafitrasa, tsy misy làlan’ny fiara (eny, eny amin’ny sisin-dàlana izahay no mitondra fiara, noho ny fahateren’ny toerana), tsy misy orana, tsy misy métro, eny fa na dia ny anarana iantsoana ny tanana aza – “Bangalore? bengalooru? bengaluroo? Inona?? “…Ary ankehitriny, amin'ny zavatra rehetra, fipoahana no anananay???…Tsy efa an-dàlam-pahalevonana sahady ve ny tanàna no TSY MAINTSY mbola ilàn’ny sasany fampiasàna zava-mipoaka toy izao ihany ity laro ity.
I Vikas Sharma  dia miteny ny amin’ny faharisarisan’ny fiantohana ny fandriam-pahalemana ao amin’ny tanana.
Tsy hay nosorohana iny. Miaraka amina jiro vonjy taitra, afampiharana goragora ny lalàna sy ny fihetsik'ireo mpitandro filaminana Bangalore, na ho ela na ho haingana dia tsy maintsy ho lasibatra ihany i Bangalore . Nanomboka nanoratra ity hafatra ity aho raha vantany vao nandre fa nisy baomba iray nipoaka tany akaikin'i Madiwala, hatreto ny isa dia tafakatra ho valo! Manantena aho fa tsy ho fambara ny amin'izay mbola zavatra ho avy izy ity…Andriamanitra anie hiaro antsika.
Vao avy nandalo tamin'ny làlan'i Mysore aho minitra vitsy lasa izay ary faly mihitsy manatrika ny PC-ko aty am-piasana, nefa tsy mbola matoky ihany koa sao mety mbola misy baomba any akaikaiky any…
I Hari Shenoy  dia manoratra mikasika ny fomba iainan’ireo olona ny ahiahiny ao am-piasany.
Nayandahalli, izay mifanakaiky amin’ny toeram-piasako, dia isan’ny toerana nitrangan’ny fipoahana, ary amin’ny maha faritra tena akaiky ity fipoahana ity amin’ny biraoko no nahatonga ireo olona eto hisavorovoro (tizzy). Azo tsapain-tànana ny fihenjanan’ny atmosfera noho ireo finday tsy mitsaha-maneno na ireo olona miantso ny havany akaiky sy malalany (dear ones) sady manantena hatrany fa mba ho tany amin’ny toerana azo antoka na tany an-trano lavitry ny loza izy ireo.
Raha nilaza ireo fampahalalàm-baovao (Times Now) fa hoe ny sehatry ny IT (Teknolojia) no tena nokendrena voalohany tamin'ilay fipoahana tao amin'ny lalam-ben'i Hosur, Koramangala sy ny toy izany, dia toa tsy mitombina loatra ihany izany vinavina izany noho ny fahatsapàna fa ny olon'ny orinasa momba ny IT dia isan'ireo olona tena voaaro tsara tokoa noho ny hafa, jerena amin'ny haavon'ny fiarovana azy ireo na ao anatiny na ivelan'ny faritra iasany.
Tsy vitsy ny olona nanoratra twittering  momba ireo fipoahana. Jace niteny hoe: «… na dia aty amin’ny antsasaka kilometatra miala amin’ny fipoahana akaiky indrindra aza izahay. Nisento tokana ny olona fa tsy voadona ny fahafahan’izy ireo mampiasa ny Aterineto. “.
Famenom-baovao azo arahana ho an’ireo mpampiasa ny twitter blastnews. 
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2008/07/26/1171/
 Sachin Uppal: http://66.102.9.104/translate_c?hl=fr&sl=en&tl=fr&u=http://sachinuppal.blogspot.com/2008/07/bangalore-bomb-blast-5-bombs-went-off.html&usg=ALkJrhgjp7YK6FaBs4svbaqZ6UxI05csXg
 Vikas Sharma : http://66.102.9.104/translate_c?hl=fr&sl=en&tl=fr&u=http://www.sharmasblog.com/archives/46&usg=ALkJrhhQcVH4MB2I0hSfaSdPH7YAcq1zqw
 Hari Shenoy: http://66.102.9.104/translate_c?hl=fr&sl=en&tl=fr&u=http://harithekid.livejournal.com/75426.html&usg=ALkJrhjh6Ar3_x5gbuKcXN_ihcXPufyu-Q
 Jace : http://twitter.com/jackerhack/statuses/867947695